आहा ! पञ्चकोट (भीडियो)::The Online Media Product by Lekhan Nepal
आहा ! पञ्चकोट (भीडियो)
इपरी सम्वाददाता, बागलुङ ।
मौषम विल्कुल सफा छ ।
बादलले घुम्टो ओढ्नै पाएन । त्यसैले पनि मानिसहरु निस्फिक्री हिमश्रृंखलाहरुको दृश्यावलोकन गरिरहेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका–६ मा रहेको पञ्चकोट आफैमा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा स्थापित छ । जति धेरै त्यहाँ निर्माण गरिएको संरचनाले आकर्षित गर्छ त्यो भन्दा बढि त्यहाँबाट देखिने सुन्दर हिमश्रृखलाले मानिसहरुको मन फुरुङ्ग बनाईदिन्छ ।
दन्ते लहर खोलि हाँसेका धवलागिरी, माच्छा पुर्छे लगायतका हिमश्रृंखलाले जो कोहीको मन नलोभ्याउने कुरै भएन । त्यस कारण पनि पछिल्लो समयमा पञ्चकोटमा पुग्ने मानिसहरुको संख्या बढिरहेको छ ।
एक पटक पुगेकालाई दोहोराई/तेह्राई र पुग्दै नपुगेकालाई एक पटक पुग्नै पर्ने ठाउँको रुपमा विकसित भएको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट बागलुङ सदरमुकामदेखि जम्मा ४ किलोमिटरको दुरीमा पर्दछ ।
खास गरि पञ्चकोटमा ताराजालकोट, कारिकोट, माझकोट, रायँरायँकोट र संसारकोट समावेश छन् । ति कोटहरु मध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा चर्चित ताराजाल कोट हो । पछिल्लो समयमा मानिसहरुले यसलाई नै सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटको रुपले चिन्दछन् ।
त्यहाँ गरुडको मूर्ति, रेलिङ सहितको पदमार्ग, मन्दिर, सिस महल, गणेश मन्दिर निर्माण गरि सकिएको छ भने हरियाली र रमणीय पार्क, ५ हजार ५ सय ५५ केजीको घण्टा र १ सय ८ फिट अग्लो विश्व शान्ति कलश निर्माणकै चरणमा छन् ।
भीडियोमा हेरौँ सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट ।